हाम्रो देशमा गरिबीको सही तथ्यांक नै छैन - Naya Patrika
हाम्रो देशमा गरिबीको सही तथ्यांक नै छैन
अक्सफोर्ड गरिबी तथा मानव विकास पहल (ओपिएचआई)ले विकास गरेको बहुआयामिक गरिबी इन्डेक्स (एमपिआई)मा नेपाल अत्यन्त कमजोर देखिन्छ । नेपालको एमपिआई शून्य दशमलव १२६ रहेको छ भने गरिब जनसंख्याको प्रतिशत २८ दशमलव ६ प्रतिशत छ । गरिबहरूमध्येमा गरिबीको औसत सघनता ४४ दशमलव २ रहेको उसको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो केन्द्रीय तथ्यांक विभागले भन्ने गरेको २३ प्रतिशत गरिबीको तथ्यांकभन्दा निकै भयावह रहेको ओपिएचआईका सल्लाहकार (दक्षिण एसिया) डा. बिजन पन्त बताउँछन् । नेपालका प्रधानमन्त्रीका पूर्वसल्लाहकारसमेत रहेका पन्तसँग गरिबीका विविध आयामबारे नयाँ पत्रिकाका जनार्दन बराल र पर्शुराम काफ्लेले गरेको कुराकानीको सार :
देश बन्न पाँच वर्ष पर्याप्त हुन्छ । तर, त्यो पाँच वर्षमा नेतृत्व बदलिए पनि देशको दिशा बदलिनुहुँदैन । विकासको मार्ग बदलिनुहुन्न । म पाँच वर्षमै कायापलट हुन्छ भनेर आशावादी छु । मैले सुरुमै गरिबी भनेको समय पनि हो भनेको थिएँ । म यो समय कहिले जान्छ भनेर पर्खिरहेको छु ।
तपाईंले बहुआयामिक गरिबी सूचकांकमा काम गरिरहनुभएको छ । गरिबीलाई तपाईंले कसरी लिनुभएको छ र गरिबी भनेको खासमा के रहेछ ?
अमत्र्य सेनले गरिबी भनेको अवसरबाट बञ्चित हुनु हो भनेका छन् । म त गरिबीलाई समय भन्छु । यो एउटा यस्तो समय रहेछ, जसले तपाईंलाई जे गर्न पनि विवश बनाउँदो रहेछ । यसले मानिसलाई शरीरको अंग तथा शरीर नै बेच्न बाध्य बनाउँदो रहेछ । गरिबीको कुनै परिभाषा हुँदैन । तर, गरिबीका कारण भने हुन्छन् । यसका बहुआयामिक पक्ष हुन्छन् । त्यो बहुआयामिक आयामलाई केलाउँदै जाँदा गरिबी चिन्न सकिन्छ र निराकरण गर्न पनि सकिन्छ । गरिबी अन्त्य गर्न गरिबीको चक्र तोड्न पनि सकिन्छ । मैले विश्वका अन्य देशमा पनि देखेँ । गरिबी अभेद्य चक्र भने होइन । तर, यो चक्र तोड्न गरिब को छ ? गरिबी कसरी हुन्छ र गरिबीका कारणहरू के–के हुन् भनेर अध्ययन हुनुपर्छ । अहिले गरिबी विश्वभर नै बढेको छ । अमेरिकामा पनि गरिबी ४० प्रतिशत रहेको छ । हाम्रो देशमा गरिबीको सही तथ्यांक नै छैन । १० वर्षमा एकपटक हुने त्यो पनि चौतारोमा बसेर गरिने जनगणनाको तथ्यांक कति विश्वसनीय होला र ? हामी गरिबीको गहिराइमा पुग्न सकेनौँ । त्यही चौतारोमा बसेर संकलन गरिएको तथ्यांकका आधारमा हामी सिंहदरबारमा बसेर योजना बनाउँछौँ । अनि हामी विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायतका निकायसँग गरिबी निवारणका नाममा ऋण तथा अनुदान माग्छौँ ।
राम्रो प्रक्रियाबाट गरिबीका कारण, त्यसका फ्याक्टर र डाइमेन्सनलाई नबुझीकन गरिएको कामले हामीलाई कहीँ पनि पु¥याएको छैन । योजना आयोगमा बस्ने, गरिबी निवारणका नाममा काम गर्ने साथीहरूले, एनजिओ–आइएनजिओका साथीहरूले देखाउनुहोला, गरिबी घट्यो भनेर भन्नुहोला । तर, गरिबी अहिले पनि घटेको छैन । तपाईंले सिस्टमेटिक ढंगले जबसम्म त्यो दुष्चक्र (भिसियस सर्कल)लाई तोड्न सक्नुहुन्न, गरिबी घट्दैन । केही समयका लागि तपाईंले जुत्ता, चप्पल र पाइन्ट लगाएको देख्नुहोला, गाउँका घरमा जस्तापाता र नयाँ रङ लगाएको देख्नुहोला, तर त्यो एकछिनको चमक मात्र हो । किनकि, अर्कोपट्टि फर्काउँदा तुरुन्तै गरिबी देखिन्छ । शिक्षाको कमी, स्वास्थ्यमा पहुँच नहुनु, जीवन बाँच्नका लागि समाजमा देखिनुपर्ने आधारभूत योग्यता र विशेषता नदेखिनु, सामाजिक चेतनामा वृद्धि नहुनुले गरिबी
घटेको देखिँदैन ।
गरिबी निर्धारण गर्दा आधार मानिएका तथ्यांक नै निकायपिच्छे फरक हुने गरेको छ । गरिबी निर्धारण गर्ने पद्धति र तथ्यांकमा किन यस्तो फरक आउँछ ?
पहिले एक दिनमा १ डलर २५ सेन्टभन्दा कम कमाइ हुने मानिस गरिब हो भन्ने परिभाषा थियो । राष्ट्रसंघ, विश्व बैंकलगायतका सरसल्लाहमा यो आधार तयार पारियो । पछि आएर फेरि त्यसलाई १ दशमलव ९० डलर भनियो । तर, दिनमा कति कमायो भन्नुभन्दा उसको अवस्था कस्तो छ भनेर जान्नुप¥यो । गरिबीको बहुआयामिक अध्ययन गर्ने पद्धतिले के भन्छ भने मानिससँग पैसा नै हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन । तर, उसका आवश्यकता र सोचमा परिवर्तन ल्याउने संरचनाहरू सकारात्मक छन् भने गरिबी घट्ने त्यसले हो । दक्षिण अमेरिका र पूर्वी युरोपमा हेर्नुस् । हाम्रोमा पनि देखिन्छ । पैसा नै नभएको परिवार पनि सुखपूर्वक बाँचेको छ । त्यसैले गरिबी घट्नलाई राष्ट्रसंघ र विश्व बैंकको तथ्यांक खोज्नु जरुरी छैन । नेपालको गरिबीलाई अमेरिकाको धनाढ्यसँग दाँजेर हुँदैन । आ–आप्mनो संरचना, भूगोल र परिवेशअनुसार गरिबीको परिभाषा हुन सक्छ । अमेरिकाको एउटा मान्छे जसको गाडी छैन र अपार्टमेन्ट छैन भने त्यो गरिब छ । त्यही भएर त अमेरिकाको गरिबी ४० प्रतिशतबाट माथि उकालो लागेको हो ।
नेपालको कर्णालीमा बस्ने एउटा मान्छेसँग खनजोत गरेर खान केही जमिन छ, सरकारी विद्यालयमा बच्चा पढ्न पठाएको छ । बच्चालाई राम्रो लुगा लगाइदिएको छ । घर सफा राखेको छ । परिवारको स्वास्थ्यको रेखदेख गर्न सकेको छ भने त्यो सम्पन्न भयो । हाम्रो तुलनात्मक अध्ययन त्यो हो । दैनिक कति डलर कमायो भन्नुभन्दा उसले बाँच्नका लागि आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्‍यो कि गरेन भन्ने कुरा ठूलो हो । देशी–विदेशी संस्था र संगठनले दिएको तथ्यांक आवश्यक छैन । गाउँबाट मानिस सहरतिर झरेका छन् । सबै कुराको अभाव देखिएको छ । उत्पादन घटेर गएको छ । कृषि उत्पादन पनि १२ महिनाबाट घटेर ३ महिना मात्र खान पुग्ने भएको छ । तर, एसियाली विकास बैंकले गरिबी घट्यो भन्छ । हामीकहाँ स्रोत कहाँबाट आयो त ? देखिने रेमिट्यान्स मात्र हो । अरू त सबै दातामै भर परिरहेका छौँ । उद्योगले थेग्ने आधार छैन । पर्यटन क्षेत्र बढेको छैन । तर, गरिबी घट्यो रे कसरी बुभ्mने ?
मैले सोध्न खोजेको चाहिँ गरिबी भनेको डलर, प्रतिशत वा अन्य तथ्यांकमा देखाउन मिल्ने कुरो हो कि होइन भन्ने हो ?
त्यो गाह्रो कुरा हो । यो प्रश्न आफैँमा संवेदनशील छ । दुनियाँलार्ई तथ्यांक त चाहिन्छ । कसैको उमेरभन्दा उसको स्वास्थ्य सोधिनुपर्छ । मेरो स्वास्थ्यसँग उमेरको सरोकार छ कि छैन ? गरिबीलाई यही रूपमा हेर्न सकिन्छ । गरिबी जान्न तथ्यांकको पनि जरुरी छ । स्वास्थ्य बुझ्न उमेरको जानकारी पनि जरुरी छ । तर, तपाईं के खाइरहनुभएको छ ? के लगाइरहनुभएको छ ? कहाँ हिँडिरहनुभएको छजस्ता कुरालाई गरिबीसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ ।
राज्य व्यवस्था चलाउने क्रममा यस्ता तथ्यांकको आवश्यकता हुन्छ । तथ्यांककै आधारमा राज्यले एउटा मापदण्ड तयार गर्छ । हाम्रै गाउँ–ठाउँमा आजभन्दा २५–३० वर्ष अघिसम्म दुई–तीनवटा कुरा मात्र किनिन्थ्यो । विद्यालयको पोसाकका लागि कपडा, मट्टीतेल र नुन किनिन्थ्यो । बाँकी घरमै उत्पादन हुन्थ्यो । हामी स्वस्थ जीवनवाट अस्वस्थ जीवनमा आएका छौँ । अनि, हामी स्वास्थ्यलाई उमेरसँग दाँजेर हेर्छौँ । त्यसैले तथ्यांक गरिबी नाप्ने आधार हो पनि र होइन पनि ।
गरिबीको कुनै परिभाषा हुँदैन । तर, गरिबीका कारण भने हुन्छन् । यसका बहुआयामिक पक्ष हुन्छन् । त्यो बहुआयामिक आयामलाई केलाउँदै जाँदा गरिबी चिन्न सकिन्छ र निराकरण गर्न पनि सकिन्छ । गरिबी अन्त्य गर्न गरिबीको चक्र तोड्न पनि सकिन्छ ।
अहिले सरकार र तथ्यांक विभागले गरिबी घटेर २३ प्रतिशतमा आइपुग्यो भनेको छ । तपाईंहरू गरिबी भयावह छ भन्नुहुन्छ । यसमा किन फरक मत ?
गरिबी निर्धारण गर्ने सरकारको र हाम्रो आधारकै बीचमा मेल खाएन । उहाँहरूले खाना पाउनुभयो ? भनेर सोध्नुहुन्छ । जवाफ दिनेले खाएँ भन्यो भने कुरो सकिन्छ । तर, हामी के–के खायो ? स्वास्थ्यमा, दैनिक आधारभूत पोषणमा के फरक पार्छ त्यो हेर्छौँ । गरिबी बहुआयामिक पक्षमा हुन्छ । शिक्षा छ भने छ । तर, त्यो शिक्षा काम लाग्ने हो कि होइन भनेर खोजिँदैन । म उहाँहरूको विधि खराब पनि भन्न चाहन्नँ । तर, तथ्यांक लिँदा पूर्ण रूपमा लिनुपर्‍यो । मैले अध्ययन गर्दा देखिएको गरिबीको जुन डरलाग्दो अवस्था छ, त्यो सबैले देखिरहेका छन् । परनिर्भर र पराश्रित अर्थव्यवस्थामा हामी रुमल्लिइरहेका छौँ । विश्व बैंकको धेरै वकालत गर्न सक्ने मानिस ठूलो विद्वान् भएको छ । आप्mनो गरिबीलाई पहिचान गरेर त्यसलाई कसरी एड्जस्ट गर्ने भन्नेसँग मतलब छैन । त्यसकारणले मेरो चासो गरिबीको पहिचान गर्ने, आधारलाई केलाउने र मापदण्ड तयार गर्ने हो । त्यो तथ्यांक विभागले पनि गर्न सक्छ । गरिबीको कारण खोतल्यो भने अवस्था प्रस्ट आउँछ ।
तथ्यांक विभागले गरिबी घटेको मापकका रूपमा जस्ताको छानालाई पनि लियो भन्ने सुनिन्छ । रेमिट्यान्स आएको, जस्तापाता लगाएकाले गरिबी घट्यो भन्नु वा त्यसरी गरिबी घटेको मापन गर्नु कति सही हो ?
तथ्यांक विभाग वा सरकारसँग गरिबी घटेको तथ्यांक देखाउन त भरपर्दो आधार हुनुपर्छ । अहिले ग्रामीण क्षेत्रमा पनि सबैको खुट्टामा चप्पल छ । तर, न त्यो चप्पल हामीकहाँ उत्पादन हुन्छ, न यहाँ पैसा बस्छ । हाम्रो अर्थतन्त्र सतही भयो । भित्र पस्नै सकेन । त्यसैले गरिबी जाँदै गएन । दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र कोलम्बियामा गरिबी कसरी घटेको छ भनेर हेर्दा, सरकारले विद्यालय खोलेको छ, गुणस्तरीय शिक्षा तोकेको छ । धनी र गरिब दुवैको बच्चा एउटै विद्यालयमा गएको छ । गरिबको आयश्रोत बढाउन र रोजगारी बढाउन उद्योगको व्यवस्था छ । कतिपयले आफैँ व्यावसायिकता बढाएका छन् । त्यसले गर्दा गरिबीको चक्र दिगो रूपमा घटेको छ । हामीकहाँ तथ्यांक विभागले दिगो विकासलाई आधार बनाएर तथ्यांक केलाउने काम नै गरेन । योजना आयोगमा बस्नेले तथ्यांकलाई दिगो विकाससँग जोडेरै हेरेनन् । जबसम्म तथ्यांक र दिगो विकासबीच सम्बन्ध खोजिँदैन, तबसम्म गरिबी घट्दैन ।
दिगो विकास भनेको वातावरणविद्को भनाइजस्तै वातावरण जोगाएर गरिने विकास कि फरक प्रकारको हो ?
त्यो मात्र काफी छैन । गरिबी घटाउने दिगो विकासका लागि आफ्नो उत्पादन खोज्नुप¥यो । गाउँको बारी बाँझो राखेर सहरमा मकै पोलेर बेच्ने मानिसलाई के भन्ने ? हिजो मकै उत्पादन गर्नेले आज अर्कोले ल्याएको मकै पोलेर बेच्छ भने उसको गरिबी घटेको भन्न मिल्दैन । गरिबी त्यतिखेर घट्छ, जतिखेर उसले आफ्नो उत्पादन बजारसम्म पुर्‍याउन सक्छ । अथवा आफ्नो सीप र क्षमता बजारमा बेच्न सक्छ । बजारमा आश्रित हुन्जेल गरिबी घट्दैन । बजार अर्थव्यवस्था उत्पादनसँग जोडिएपछि मात्र गरिबी घट्छ । हामी विदेशी उत्पादनमा आश्रित भएका छौँ । आज त धन्न गाउँ–ठाउँबाट हरिया मकै आउँछ । भोलि त्यो पनि विदेशबाट आउने अवस्था नहोस् । मानिसहरू विश्वव्यापीकरणको कुरा गर्लान् । तर, परनिर्भर होइन, अन्तरनिर्भर हुन सक्नुपर्छ ।
हाम्रो सन्दर्भमा मुलुकभित्रैका उत्पादन पनि बचाउने र मानिसहरूलाई यहीँ रोजगारी सिर्जना गर्ने काम कसरी गर्न सकिएला ?
हामीसँग जे साधन स्रोत छ, त्यसको प्रचुर उपयोग नै पहिलो सर्त हो । हामीसँग भएको साधन श्रोत हामीले उपयोग गरेकै छैनौँ । कृषि कै कुरा गरौँ, सबै खेतमा दलहन, धान, मकै उत्पादन गर्नु जरुरी छैन । फलफूल, चिया, कफी उत्पादन गर्न सकिन्छ । अर्थात् वातावरणअनुसार जे उत्पादन गर्न सहज छ, त्यहीअनुसारको उत्पादनलाई बढावा दिनुपर्छ । आफूलाई पुग्ने मात्र होइन, बाहिर निर्यात गर्ने सोच राख्नुपर्छ । त्यस्तै उद्योगमा पनि सोच्नुपर्छ । सिमानापारि मिल छ, हामी उखु त्यहाँ पठाउँछौँ । हामी विभिन्न विवाद गरेर यहाँका उद्योग बन्द गर्छौँ, अनि उखु बाहिर पठाउँछौँ । कतिपय चिज आफ्नै देशको उत्पादन भनिएको छ, तर कच्चा पदार्थ सबै बाहिरबाट आउँछ । त्यसैले कच्चा पदार्थ देशमै भएको उद्योगलाई अघि बढाउनुपर्छ । त्यसपछि पर्यटनलाई पनि हेर्न सकिन्छ । इको टुरिजम र ट्रेकिङ चलेको ठाउँमा बाटो किन नपुर्‍याउने ? त्यसैले गरिबी घटाउन र उन्नत देश बनाउन सम्भावना प्रचुर छ । हामी त्यो बाटोतिर लागेनौँ । हामी टालटुल गरेर लाउने, झिलिक्क हुने र सकिने बाटोमा छौँ ।
तपाईंको परिकल्पनामा गरिबीविहीन अवस्था कस्तो हुन्छ ?
त्यसमा त्यति ठूलो कुरो छैन । गुणात्मक शिक्षामा पहुँच हुनुपर्‍यो । ग्रामीण क्षेत्रमा एउटा नागरिक स्वास्थ्य सेवा नपाएर मर्नुनपरोस् । एउटा किसानको छोरा विद्यालय खोज्दै भौँतारिएर सहर पस्नुनपरोस् । उसको एउटा सफा, सुग्घर, शौचालय भएको, पानी पुगेको घर होस् । उसले खाने खानामा आवश्यक पोषक तत्व पुगेको होस् । त्यसमा कसैको धेरै भर पर्नुपर्दैन । राज्यले दुई–चार कुरामा ध्यान दियो भने उसको जीवन गाउँमै धेरै सुखसँग बित्छ । अनि, उसले आफ्नो उत्पादन बजारमा दिन सक्छ । जसबाट राज्यले पनि कर उठाउन सक्छ । कुनै निकायले नेपाललाई ऋण दिएर अस्पताल बनाउँदैमा स्वास्थ्य सेवा पुग्दैन । त्यहाँ डाक्टरको व्यवस्था हुनुप¥यो । त्यहाँ आवश्यक मेसिन तथा औजार चाहियो । अर्थात् दिगो बाटोतर्फ जानुप¥यो । मान्छेलाई आफ्नै स्थानमा रमाउन र बाँच्न सक्ने आधार तयार गर्नुप¥यो । केही चाहिए राजधानी आऊ, गाउँमा हामी आउन सक्दैनौँ भनेर हुँदैन । यहाँ विकास राजनीतिक मुद्दासँग जोडिनुहुन्न । विकासको आफ्नै मुद्दा हुन्छ ।
राजनीतिक दल र राज्यका इन्स्टिच्युसनहरूको गरिबीसँग के सम्बन्ध हुन्छ ?
घरका बाबु–आमाले छोराछोरी कस्तो चाहन्छन् ? राज्यले नागरिकलाई गर्ने व्यवहार पनि त्यस्तै हो । आफ्नो सन्तान जिम्मेवार होस् र कमाएर खाओस् भनेर बाबुआमाले बाटो देखाइदिन्छन् । स्रोतको व्यवस्था गर्छन् । बाटो देखाउँछन्, सहजीकरण गर्छन् र परेका वेला आवश्यक सहयोग गर्छन् । तर, गैरजिम्मेवार छोराछोरीचाहिँ आफैँमा मस्त हुन्छन् । आफ्नै पारामा भड्कन्छन् । कुनै बच्चा आफैँ सचेत हुन्छ र आफ्नो बाटो बनाउँछ । राज्य र यसका इन्स्टिच्युसनको दायित्व पनि त्यस्तै हो । राज्यले गरिबी घटाउन कति सहयोग गर्छ भन्ने उसको सोच र दूरदर्शितामा भर पर्छ ।
राजनीतिक दलहरू विकासको अवरोधका रूपमा भौगोलिक अवस्थालाई देखाउँछन् । यो साँचो हो ?
यो गलत कुरो हो । योजना आयोगमा बस्नेहरूको दूरदर्शिताको अभाव हो । उनीहरूले राजनीतिक दललाई सम्झाउन सक्नुपथ्र्यो । राजनीतिक दलका नेताले जहाँ भन्यो त्यहाँ पुल बनाउने र बाटो बनाउने भन्दा आवश्यकता र सम्भावनाको कुरा बुझाउनुपथ्र्यो । नेपालको फ्रेम यसरी बनाऔँ भनेर एउटा गति नै परिवर्तन गर्न सकिन्थ्यो । तर, यहाँ त अल्पकालीन फाइदाका लागि दीर्घकालीन कामहरू अलपत्र बनाइयो । २१ वटा राष्ट्रिय महत्वका योजनालाई मात्र ध्यान दिएको भए अहिले हामी कहाँ पुगिसक्थ्यौँ । देश बनाउन बजेट छर्नेभन्दा पाँच वर्षमा यो पाँच आयोजना सक्छु भनेर लाग्नुपर्‍यो । जुन देशमा योजना आयोगले नै बजेट बाँडीचुँडी भाग लगाउँछ, त्यहाँ कसरी विकास हुन सक्छ । नेपाल हीराजस्तो छ । तर, त्यसको सदुपयोग गर्ने कोही भएन ।
एउटा अनुमान गरौँ न । ५, १० वा २० वर्षपछि हाम्रो विकास र गरिबीको अवस्था कस्तो होला ?
यो नीति निर्माताको प्रतिबद्धता, राजनीतिक नेतृत्वको दूरदर्शितालगायतका सबै कुराले काम गर्छ । देश बन्न पाँच वर्ष पर्याप्त हुन्छ । तर, त्यो पाँच वर्षमा नेतृत्व बदलिए पनि देशको दिशा बदलिनुहुँदैन । विकासको मार्ग बदलिनुहुन्न । म पाँच वर्षमै कायापलट हुन्छ भनेर आशावादी छु । मैले सुरुमै गरिबी भनेको समय पनि हो भनेको थिएँ । म यो समय कहिले जान्छ भनेर पर्खिरहेको छु । म यस्तो समयको पर्खाइमा छु, जुन समयले दिशा पक्रिन्छ । अहिले दिशा नै लिएको छैन । म सम्भावना प्रचुर देख्छु । विश्वको कुनै पनि देश बन्न थालेपछि त्यो चार–पाँच वर्षमै लम्कन्छ । हाम्रोमा सूचना, स्रोत सबै समयमै जुटेकाले अघि बढ्न अझ सहज हुन्छ । प्रधानमन्त्री बदलिए पनि विकासको सोच र बाटो नबदलियोस् । सत्तामा जाने आकर्षण जहिलेबाट घट्न थाल्छ, त्यसवेलादेखि देशको विकासले गति लिन्छ ।